Umaka: i-specle | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 1, 2015 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 Douglas Karr
Ukushicilelwa kwe-Niche kusaqhubeka nokuhambisa okuqukethwe okubhekiswe kakhulu kumaqembu ahlukile. Ngenkathi izinhlelo zokukhokha ngokuchofoza ngakunye, ezihambisana nazo kanye nezibhengezo ziqhubeka nokulawula imakethe ngenqubo yazo elula yoku-oda nezindleko eziphansi ngokuhola ngakunye, ngokuvamile bathola ukuchofoza okuphansi nezinga lokuguqulwa. Ngoba zingabizi kakhulu, zisengavuna imivuzo emangalisayo futhi zibe nembuyiselo eqinile ekutshalweni kwezimali kwabakhangisi. Cabanga ngokuziphatha kwakho kokuphequlula nokucwaninga. Njengoba ngibheka kufayela lami le-